गर्भनिरोधक चक्की के हो ? कति पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ? – News Nepali Dainik
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७ समय: २३:४५:४०
किशोर अवस्था लागेसँगै शारीरिक रुपमा आउने परिवर्तनले केहि किशोरकिशोरीले आफूलाई शारीरिक सम्पर्कका लागि परिपक्क भएको महशुस गर्दछन् । तर किशोर अवस्था शारीरिक सम्पर्कका लागि परिपक्क उमेर भने होइन । शारीरिक सम्पर्क गर्ने कुनै पनि ब्यक्ति युवा उमेरमा प्रवेश गरेको हुनुपर्छ ।
तर आज हामी शारीरिक सम्पर्कका बारेमा भन्दा पनि शारीरिक सम्पर्क भए पश्चात रहन सक्ने गर्भ निरोधका बिषयमा चर्चा गर्नेछौँ । यौन सम्बन्ध हुनासाथ अधिकाशंले आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्ने गर्दछन् । तर के यसरी गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्नु उचित हुन्छ त ? वा, कति पटकसम्म सेवन गर्दा यसले हानी गर्दैन ?
गर्भनिरोधक चक्कीमा हर्मोनको मात्रा सामान्यभन्दा बढी हुन्छ । हर्मोन बढी भएकै कारणले यो गर्भ निरोधका लागि प्रभावकारी मानिन्छ । तर गर्भ निरोधक चक्कीको प्रयोग आकस्मिक वा कहिलेकाही मात्र प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ ।
गर्भनिरोधक चक्की कति पटक प्रयोग गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म कममात्रामा प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि सही हुनेछ । किनकी बारम्बार वा नियमित गर्भ निरोध चक्कीको सेवन गर्दा यसले शरीरमा हर्मोनको सन्तुलनलाई असर गर्नसक्छ । जसका कारण महिलामा महिनावारी गडबढीको समस्या हुनसक्छ ।
साथै बिस्तारै गर्भनिरोधक चक्कीको प्रभावकारितामा समेत कमी आउने संभावना रहन्छ । यसरी नियमित गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग गर्नुभन्दा बरु कण्डम वा अन्य साधन पिल्स, डिपो, कपर टीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
Last Updated on: February 7th, 2021 at 11:45 pm
५४८८ पटक हेरिएको